‘रोमियो एण्ड मुना’ को विकिनी गीत ब्याण्ड ! « Ramailo छ
‘रोमियो एण्ड मुना’ को विकिनी गीत ब्याण्ड !
समय : 9:41 am
फागुन ११ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘रोमियो एण्ड मुना’ को ‘स्याडविच मी’ गीतको भिडियोमा सेन्सर लागेको छ । युट्युवमा सिमित उमेर समुहलाई हेर्न मिल्ने गराइएको गीतको भिडियोलाई टेलिभिजन च्यानलहरुले प्रशारण गर्न अस्विकार गरि रहेका छन् । ‘युट्युव मनिटाइजेशन पनि गरिइएको छैन’, निर्माता प्रशन्न गोपाली भन्छन् ।
किन ब्यान्डको अवस्थामा पुग्यो त स्याण्विच म संग ? भल्गर भयो भन्ने कुरा आएको छ, निर्माता गोपालीको भनाई छ । उसो त प्रेसमिटमै विकिनी गल्र्स उतार्दा निर्माण पक्षले आलोचना भोग्नु परिरहेको छ । निर्देशक नरेश कुमार केसी भने रोमियाको क्यारेक्टर अनुसारकै उक्त गीतको भिडियो बनाइएको दाबी गर्छन् । गीत हेर्नुस् :
निर्देशक केसी भन्छन्, गाउँकी मुना र शहरको रोमियो बिचको कथा हो । त्यसैले दुवैको पृष्ठभूमि भिन्न छ । जुन गीतमा पनि भिन्नता देखिन्छ । फिल्ममा विनय श्रेष्ठ र सृष्टि श्रेष्ठ शिर्ष भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् ।